Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ku saabsan Xuquuqda Aadana Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa maanta ku dhaliishay dowladda Soomaaliya inay sanadkii hore ee 2014 horumar xaddidan ka sameysay ilaalinta xuquuqda dadka rayidka ah oo ay xustay inay xadgudubyo kala kulmeen kooxaha hubeysan.
Hay’adda oo maanta soo saartay warbixinteeda caalamiga ah ee ay ugu talagashay sanadkan 2015 ayaa tilmaantay in dadka gudaha dalka ku barakacay ay noqdeen kuwo u nugul tacaddiyada jinsiga iyo in si khasab ah looga saaro xeryaha ay ku nool yihiin.
Human Rights Watch ayaa Al-Shabaab ku eedeysay inay weerarro ku beegsatay dad aan waxba galabsan.
Ku-xigeenka madaxa Afrika ee Human Rights Watch, Leslie Lefkow ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ku guul-darreysatay inay ka hor tagto xadgudubyada oo ay caddaalladda siiso mudnaanta koowaad.
Dowladda Soomaaliya ayay sheegtay inay weli ku tiirsan tahay maxkamadda ciidanka qalabka-sida, sanadkii la soo dhaafayna waxay soo hadal-qaadday inay maxkamadda xukuntay 15 qof oo 13 ka tirsan aanay askar ahayn.
AMISOM waxay ku eedeysay tacaddiyo dhinaca jinsiga ah inay geysatay.